Etu esi etinye Telegram na Linux? | Site na Linux
Etu esi etinye Telegram na Linux?
Telegram ozi bụ ngwa izi ozi ngwa ngwa gbadoro anya n’iziga na ịnata ozi na ozi ọtụtụ ozi. Na mbu, ejiri ya rụọ ọrụ maka ekwentị mkpanaaka na afọ na-esote maka ịba ụba maka ihe karịrị 10 sistemụ arụmọrụ: Android, iOS, macOS, Windows, GNU / Linux, Firefox OS, ihe nchọgharị weebụ, na ndị ọzọ.
n'etiti njirimara ya isi anyị nwere ike ịkọwapụta ya nchịkọta akụkọ ihe mere eme ike, 6 na ike ịchekwa ọdịnaya site na mkparịta ụka, faịlụ ruru 1.5 GB, gụnyere akwụkwọ, multimedia na eserese eserese, ọchụchọ ọdịnaya ụwa, akwụkwọ ịkpọtụrụ, oku, ọwa mgbasa ozi, supergroups, n'etiti ndị ọzọ.
telegram jiri akụrụngwa gị jiri teknụzụ MTProto. Na mgbakwunye na njirimara ndị bụ isi, ọ na-enye usoro ikpo okwu bot na mgbakwunye na ịme mkparịta ụka nwere ọgụgụ isi ma nwee ike ịrụ ọrụ ndị ọzọ ma gbakwunye ahụmịhe na mkparịta ụka.
Iji wụnye Telegram na Linux anyị nwere ọtụtụ mfe echichi ụzọ nke anyị nwere ike ịnụ ụtọ ngwa site na nkasi obi nke desktọọpụ anyị.
1 Etu esi wụnye Telegram na Ubuntu 18.04 na nkwekọrịta?
2 Etu esi etinye Telegram na Debian Sid?
3 Etu esi etinye Telegram na Fedora 28 na nkwekọrịta?
4 Etu esi wụnye Telegram na Arch Linux na nkwekọrịta?
5 Etu esi etinye Telegram na Snap?
6 Etu esi etinye Telegram na Flatpak?
7 Esi ewepu Telegram na Linux?
Etu esi wụnye Telegram na Ubuntu 18.04 na nkwekọrịta?
Na-arụ ọrụ enweghị ngwa maka Telegram n'ime ebe nchekwa Ubuntu ebe ọ bụ na ndị mmepe Telegram na-ahọrọ inye naanị faịlụ ọnụọgụ abụọ.
Ọ bụ ya mere anyị ga-akwado ebe nchekwa nke atọ iji wụnye ngwa ahụ. Anyị ga-emeghe ọnụ ma gbue iwu a:
Mere nke a ugbu a anyị na-emelite nchekwa ma wụnye ngwa ahụ:
Etu esi etinye Telegram na Debian Sid?
Naanị maka ụdị Debian a anyị nwere ngwa n'ime nchekwa gọọmentị, maka ịwụnye naanị anyị ga-egbu na ọnụ:
Ma ihe na-eme maka nsụgharị ochie, echegbula anyị nwere ike iwunye Telegram site na Snap na Flatpak n'okpuru m na-akọrọ iwu maka ya.
Etu esi etinye Telegram na Fedora 28 na nkwekọrịta?
N'ihe banyere Fedora na ndi ozo, anyị nwere ike iwunye ngwa a cna enyemaka RPMFusion repository, nke dị mkpa na ị wụnye ya ma gbanye ya na sistemụ gị.
Ka ịwụnye ya dị na-agba ọsọ na-esonụ iwu:
Etu esi wụnye Telegram na Arch Linux na nkwekọrịta?
Maka Arch Linux ikpe, anyị nwere nchịkọta abụọ n'ime nkee Ebe nchekwa AUR telegram-desktọọpụ-biini na ngwugwu telegram-desktọọpụ-git, ihu ọma na nke ọ bụla n'ime ha ị na-enweta ngwa ahụ.
Ọ bụ ezie na-atụ aro bụ bin Ebe ọ bụ na ọ ga-ewe nsụgharị kachasị ọhụrụ n'oge ọ bụla site na ngwugwu nke ndị mmepe Telegram na-enye, na mgbakwunye na ọ bụrụ na ị gbalịa ikpokọta git ị ga-atụkọta ọtụtụ ihe site na m.
Maka nwụnye gị ikwesiri ịwụnye Yaourt na sistemụ gị naanị ị ga-emezu iwu a:
Etu esi etinye Telegram na Snap?
Maka ndị ọzọ na-ekesa ma na ndị e kwuru n'elu anyị nwere ike iwunye ngwa ahụ site na snap ngwugwuNaanị ka anyị nwee ike ịnweta teknụzụ a na sistemụ anyị.
Ugbu a anyị ga-emeghe ọnụ na-agba ọsọ iwu na-esonụ:
Etu esi etinye Telegram na Flatpak?
Ọ bụrụ na ịmasịghị Snap ma ọ bụ na ịnweghị ya, ị nwere ike ịnụ ụtọ Telegram na kọmpụta gị tinyere ngwa ahụ na enyemaka nke Flatpak, n'otu ụzọ ahụ ị ga-enwerịrị teknụzụ a na sistemụ gị.
El wụnye iwu bụ nke a:
Esi ewepu Telegram na Linux?
Ọ bụrụ n'ịchọrọ iwepu ngwa ahụ na sistemụ gị, ị nwere ike ime ya site na ị na-agba ọsọ iwu iwepụ sọftụwia site na usoro ngwugwu gị, ọ bụrụ na ị jiri usoro nrụnye ọ bụla si ebe a, Ana m ekekọrịta iwu iji wepu Telegram na kọmputa gị:
N'ihe banyere Debian:
Ọ bụrụ na ị wụnye na Snap:
Maka Arch Linux na nkwekọrịta, anyị na-ewepụ ya na:
N'ihe banyere Fedora ị ga-ewepụ na:
Ọ bụrụ na ị wụnye ngwa na Flatpak:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Etu esi etinye Telegram na Linux?
Enwere ọwa maka blog a na Telegram?
Ebe ọ bụ na Ubuntu mbipute 17.10 enwere ngwugwu gọọmentị na nchekwa:
O jeere m ozi site na ọnụ ya na pepem 10, na-arụ ọrụ ziri ezi, ekele!
Kevin Figueroa dijo
Ihe ngwungwu telegram-desktọọpụ dị na Linux Mint gọọmentị Linux, ma ọ bụ oge na-aga. Achọrọ m ịwụnye ụdị kachasị ọhụrụ na sistemụ ahụ, kama ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ dị mfe ha na-enye na weebụsaịtị Telegram
Zaghachi Kevin Figueroa
LibreOffice 6.0.4 dị ugbu a karịa 88 ndozi